हिज्जे उपकरणहरू, वस्तु कलाको एक गैलरी जुन तपाइँ आफ्नो कागजातमा थप्न सक्नुहुन्छ, साथै मेनूहरू कन्फिगर गर्न र प्रोग्राम् प्राथमिकताहरू सेट गर्नका लागि उपकरणहरू समावेश गर्दछ।
हातैले हिज्जे जाँच गर्छ ।
एउटा सबमेनु खोल्दछ जहाँ तपाईँले भाषा सम्बद्ध आदेशहरू रोज्न सक्नुहुन्छ।
हालको कागजात भित्र अध्याय क्रमाङ्कनका लागि सङ्ख्या ढाँचा र श्रृङ्खला बर्णन गर्दछ।
पादटिप्पणी र अन्तटिप्पणीहरू प्रदर्शन सेटिङस निश्चित गर्नुहोस्.
ग्रन्थ सूची डाटाबेस
पत्र मर्ज विजार्ड
फारम चिठ्ठीहरू निर्माण गर्न पत्र मर्ज विजार्ड सुरु गर्नुहोस् वा इमेल सूचनाहरू थुप्रै प्रापकहरूलाई पठाउनुहोस्.
क्लिपबोर्डको परिणाममा चयन गरिएको सूत्र र प्रतिलिपिहरू गणना गर्नुहोस्.
अद्यावधिक वस्तुहरू हालको कागजातमा जस सँग गतिशिल सामाग्रीहरू छन्, जस्तै फाँटहरू र अनुक्रमणिकाहरू.
मिडिया प्लेयर खोल्दछ जहाँ तपाईँले चलचित्र पूर्वदृश्य र ध्वनि फाइलहरू हालको कागजात भित्र यि फाइलहरू पनि घुसाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईँ रेकर्ड गर्नुहोस् वा सङठित गर्नुहोस्र म्याक्रोहरू सम्पादन गर्नुहोस् ।
XML फिल्टर सेटिङहरू
XML Filter Settings संवाद खोल्नुहोस्, जहाँ तपाईँ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पादन, मेटन, र परिक्षण फिल्टरहरू आयात गर्न र XML फाइलहरू निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईँले टाइपको रूपमा स्वचालित तवरले पाठ बदल्दाका लागि विकल्प सेट गर्छ ।
निर्माण, सम्पादनहरू, वा स्वत: पाठ घुसाउनुहोस्. तपाईँं ढाँचा गरिएको पाठ, पाठ ग्राफिक्स सँग, तालिकाहरू, र फाँटहरू स्वत: पाठ को रूपमा. स्वत: पाठ द्रुत घुसाउनका लागि, स्वत: पाठ तपाईँंको कागजातमा सर्टकट टाइप गर्नुहोस्, र थिच्नुहोस् F3.
अनुकूलित कार्यक्रम कन्फिगरेसनका लागि यो आदेशले एउटा संवाद खोल्दछ।
Title is: उपकरणहरू